Posted by သက်ဝေ at 1:15 PM
မိုးငွေ့........ May 14, 2013 at 3:40 PM
မဂ္ဂဇင်းမှာတော့မဖတ်ဖြစ်ဘူး ဒီမှာပဲဖတ်လိုက်တယ်အစ်မ...။ ခုတလော အမနှစ်ယောက်အပြိုင်ကျဲနေကြတယ်..။
မြသွေးနီ May 14, 2013 at 5:53 PM
Ebook မှာထဲက ကြိုက်ခဲ့တာ...
တန်ခူး May 14, 2013 at 9:27 PM
ဘယ်လိုမှကြိုတင်တွေးလို့ မရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးနဲ့ ဇာတ်သိမ်းလေး. ဇာတ်ကောင်၂ယောက်နဲ့ တင် ပြီးပြည့်စုံသွားတဲ့တင်ပြပုံလေးကလှလိုက်တာ.
Thwin May 14, 2013 at 10:38 PM
တစ်ကယ့်ကို ဇာတ်သိမ်းကို မခန့် မှန်းနိုင်လိုက်ဘူး..။ ဝတ္ထုရှည်ကြီးရေးပြီး ဇာတ်ကားရိုက်လိုက်ရင် အရမ်းကို မိုက်မှာပဲ..နော်..။
chocothazin May 17, 2013 at 11:15 AM
rose of sharon May 28, 2013 at 6:39 PM